Ao amin’ny Saikinosin’i Sinai ao Ejipta, Tsy Mitsahatra Ireo Fahatapahan’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Rehefa tapaka ireo tambajotra Ejiptiana, ny an'i Israely no ampiasaina
Voadika ny 29 Avrily 2019 18:51 GMT
Fihetsiketsehana manohitra ny fiatoan'ny finday tany Sinai Avaratra. Mivaky toy izao ny sorabaventy: “Tsy te-hampiasa ny tambajotra Israeliana izahay noho ny fanaovanareo antsirambina.” Sary avy amin'ny pejin'ny vondrona Sinai2014/SinaiOutofCoverage.
Any Avaratr'i Sinay, ny zavatra voalohany indrindra ataon'ireo olona rehefa mifoha dia ny mijery ny findainy mba hijerena fa tena mbola mandeha foana ny fifandraisany amin'ny finday sy ny Aterineto. Indrisy, diso fanantenana saika ho isanandro izy ireo. Izany no zava-misy mahazatra anay efa hatramin'ny volana Septambra farany teo, taorian'ny fiandohan'ireo hetsika ara-tafika tao Avaratr'i Sinai. Saika ho isanandro izahay no mifoha mba hahita hoe tsy mandeha ny fifandraisana. Maharitra eo amin'ny 12 ora eo izany amin'ny ankapobeny.
Nanomboka teto ireo hetsika ara-tafika ireo tamin'ny volana Septambra 2013, tao anatin'ny adin'ny governemanta amin'ny asa fampihorohoroana, taorian'ireo andiana fanafihana maro izay nikendry ny tafika sy ny polisy tao amin'ilay saikinosy. Ho an'ireo mponina eny an-toerana, maro ny fiantraikan'ilay fanafihana: napetraka teny amin'ireo lalambe lehibe mampifandray ireo tanàna any Avaratr'i Sinai ny toerana fisavana maro. Napetraka tany amin'ny faritra sasany fa amin'ny 4 hariva no ora farany hahafahana mivezivezy. Vao mainka nanampy ny fijaliana ho an'ny fiainan'ny vahoaka ny tsy fandehanan'ny tolotra amin'ny finday sy Aterineto isanandro.
Miezaka manao tsindry [ar] amin'ireo mpamatsy ny sasany amin'ireo mpampiasa tambajotra finday mba hanovàna ity fironana ity. Tamin'ny volana Oktobra farany teo, nanapa-kevitra ny hanenjika ireo orinasa am-perinasa ireo teny anoloan'ny fitsarana ny vondrona iray avy ao Avaratr'i Sinai noho ny fahatapahana miverimberina sy fahataran'ny famerenana ny fifandraisana. Niantso ireo olona rehetra mba hanatevin-daharana ilay fanenjehana ny pejy Facebook [en] iray izay nikendry indrindra ny Mobinil noho ireo fahatapahana tolotra miverimberina sy maharitra, fa tsy nisy vokany izany. Ao afovoan'ny renvohitr'i Arish, natao ny fihetsiketsehana roa nanoherana ireo fahatapahana. Nosamborina sy notànana nandritra ny iray andro manontolo ny iray tamin'ireo mpikarakara ilay fihetsiketsehana voalohany (mpikambana mpamorona ilay hetsika 6 Aprily tao Avaratr'i Sinai) taorian'ilay hetsika.
Nanomboka tenifototra tao amin'ny Facebook sy Twitter ny mpikatroka sasany avy tany Avaratr'i Sinai teo ambanin'ny lohateny hoe #Sinai_out_of_coverage (#سيناء_خارج_التغطية) nanehoana ireo fijaliany isanandro miaraka amin'ireo fahatapahana tambajotra, sy fanantenana fa ho heno ny feony ary hahita fiainana toy ny mahazatra indray izy ireo.
Tsy mikasika ireo finday irery ihany ilay olana — mahakasika ireo mpiasa sy ny fahavokarana any amin'ny toerana toy ny paositra, banky, ary firaketam-bahoaka ihany koa ireo fahatapahan'ny tolotra. Nanazava i Marwa R., mpampianatra any amin'ny sekoly izay nitafatafa niaraka tamin'ny Global Voices fa “niverimberina matetika tany amin'ireo firaketam-bahoaka [any amin'ny birao] mba hanavao ny kara-panondroko aho saingy isaky ny mandeha any aho dia hitako fa tsy nandeha izany noho ireo fifandraisana tapaka.”
Mijaly noho ny fahatarana amin'ny fandraisana ny karamany ireo mpiasam-panjakana maro satria mijanona tsy miasa ireo banky isaky ny tapaka ny tambajotra. Vehivavy iray hafa, mpampianatra ihany koa, no nitaraina hoe: ” Efa andro maromaro aho izao no niezaka ny hahazo ny karamako fa tsy mandeha izany isaky ny mankany amin'ny banky aho. Miandry ireo fifandraisana mba hiverina fotsiny aho ary handeha haingana any amin'ny banky, angamba afaka manao izany androany aho.”
Mpampianatra maro no mivezivezy isanandro avy any Arish mankany Rafah (ao amin'ny sisintany Atsinanan'i Ejipta iraisany amin'i Gaza) sy Sheikh Zuwaid (Rafah Any Atsimo) na mankany amin'i Sinai afovoany, mandeha amina lalana mampidi-doza misy milina voafandrika, fitifirana ary fifanandrinana eo amin'ny tafika sy ireo mpikatroka. Nisy tranga roa vao haingana izay nahavoa ny vondrona mpanabe maro nandeha fiara fitaterana niharana fifanandrinana mahery vaika — tamin'ireo tranga roa ireo, samy notifirina ary maro no tena naratra mafy tamin'ireo mpampianatra ireo. Manahy foana ho an'ireo havan-tiany mivezivezy amin'ireny faritra mampidi-doza ireny ireo fianakaviana ary maniry ny hahazo antoka hoe tsy misy ahiana ny amin'ireo mpikambana ao anatin'ny fianakaviany miasa any amin'ireny toerana ireny. Fa noho ny tsy fisian'ny fifandraisana an-tariby, tsy afaka manao izany izy ireo. Mijaly noho ireo fahatapahana tolotra ihany koa ireo tompona tsena cyber sy varotra finday, izay mahatonga azy ireo zara raha mahazo vola kely mba hitazonana ny raharaham-barotra ataony.
Rehefa mandeha ireo tambajotra, ezahan'ny rehetra ny hanao izay zavatra rehetra ilàna fampiasàna finday na Aterineto, fa na izany aza, tena ratsy be loatra ilay tolotra ka kely fotsiny ny zavatra vitany. Sarotra ho an'ny olona ny hanao antso an-tariby, ary matetika samy tsy misy afaka maheno na inona na inona ny roa tonta.
Lazain'ireo manampahefana momba ny fiarovana fa naato ny fifandraisana satria mampiasa finday ireo mpikatroka mba hifandraisana sy hanapoahana ireo milina voafandrika. Mety ho marina izany, fa natao ho an'ny daholobe ireo tambajotra ireo. Misy fiantraikany any amin'ny rehetra ny fanafoanana azy ireo.
Milaza mihitsy aza ny sasany fa tena mahery vaika ny tambajotra manodidina an'i Israely sy Palestina ka tena mandrakotra faritra maro ao Avaratr'i Sinai izany. Rehefa tapaka ireo tambajotra Ejiptiana, tsotra fotsiny, ireny no ho ampiasain'ireo mpikatroka. Raha fintinina dia ireo olon-tsotra tsy manan-tsiny ihany no mijaly indrindra amin'ilay fahazarana amin'ny fahatapahana isanandro.